नयाँ वर्ष! जादु वाक्यांश, भविष्यको लागि धेरै गोप्य इच्छा र आशा नै यसलाई लुकाउँछ कसरी के छ। एक आउँदै नियुक्ति वर्ष अविस्मरणीय बनाउन तपाईं कसरी चाहनुहुन्छ। त्यसैले त हामी यसो भन्छन्: "नयाँ वर्ष कसरी मनाउन, त्यसैले यसलाई खर्च।" गरेको बैठक मजा, Incendiary र अद्वितीय बनाउन प्रयास गरौं!
पहिले नै तैयार अप रूख गरे , सामान्य सफाई सलाद कटौती र शैम्पेन एक बाल्टिन मा cooled छ। को पाहुना, सुन्दर र आफ्नो अतिथिहरूको लागि प्रतीक्षा राम्ररी लुगा। यो सबै unclouded मजा लागि प्रदान गरिएको छ, तर दुर्भाग्य, हामी हास्य र मजा हाम्रो घर भर्न हुनेछ भूल गरेको जस्तो देखिन्छ। हास्यास्पद नयाँ वर्षको अभिवादन - यो हामी सबै आज सुन्न र आफूलाई आफ्नो साथी तथा आफन्तहरूले गर्न प्रस्तुत गर्न चाहनुहुन्छ के छ। तपाईंको कल्पना, जडान हास्य, को अर्थमा बुद्धि र तपाईं प्राप्त सबै।
सबै को सबै भन्दा राम्रो किनभने अरू जो कुनै पनि nuance वा वर्ण वर्तमान गुण थाहा सक्नुहुन्छ रमाइलो नयाँ वर्ष अभिवादन को पाहुना वा अतिथि को एक composes गर्दा। ती वर्तमान को विशेष आचरण वा वर्ण गर्न allusions बनाउन मुक्त, आफ्नो मित्र को जीवनबाट परिस्थिति र घटना सबै प्रकारका संग खेल्छ। यदि यो असफल हुन तपाईं देखिन्छ धेरै छैन, यो राइम चिन्ता। यो कुरा छैन! हास्यास्पद क्रिसमस अभिवादन साँच्चै "कायरता" र रमाइलो थिए कि मुख्य कुरा। तपाईं Zhvanetskiy छैन वा Arcana, त्यसैले तिनीहरूलाई आवश्यक छैन हुन। तथापि, कौशलता को अर्थमा बारे मा भूल छैन: cynicism र अपमान जो सँगै साथी, परिवार वा सहकर्मी ल्याए नयाँ वर्षको तालिका लागि अनुपयुक्त छन्।
यस कवितात्मक सरस्वती तपाईं बायाँ छ भने, निराश, मजा नयाँ वर्षको अभिवादन सुने छन् र गद्य गर्छन्। तिनीहरूले मानिसहरूलाई रमाइलो र आराम गर्न आएको किनभने, लामो छैनन् भनेर प्रयास सट्टा रिपोर्ट सुन्नुको। ठूलो संख्या प्रकाशित अहिले जो बधाई अवस्थित खाली लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
वैकल्पिक रूपमा, उदाहरण निम्न को विचार एक नयाँ वर्षको रमाइलो। सामान सबै किसिमका एक गाढा झोला मा अग्रिम गुना: एक दांत कोट्याउने सिन्का, दुर्गन्ध, कंडोम प्याकेजिङ्ग, आदि एक अतिथि गर्नुभएको प्रेम एक लागि क्रिसमस उपहार रूपमा झोला मा राखिएको विषयमा वर्णन, वा बच्चा को मुख्य अतिथि पूर्व-आँखा बाँध ... दर्शक कथा भन्नुभयो र यो सम्बन्धित प्रश्न छ, जो को वस्तु देख्नुहुन्छ। को वर्णनकर्ता यो के हो अनुमान छ। Homeric हँसी, हामी तपाईंलाई ग्यारेन्टी।
पनि सबै महिलाहरु गर्न उपस्थित (र मात्र) उहाँलाई चुम्बन गर्न आमन्त्रण गर्न, र उहाँलाई चुम्बन गर्ने अनुमान पर्छ, को आगन्तुक आँखा बांधन गर्न सक्नुहुन्छ। अतिथिहरूको प्रेम हुनेछ! यद्यपि, यो अझ राम्रो र रोचक आफ्नो बधाई छ, बनेको र व्यक्तिगत तपाईं आविष्कार, यो तपाईं मिल असम्भाव्य छ। सुन्दर नयाँ वर्षको अभिवादन - यो आफ्नो कल्पना र बुद्धि छ, बदलामा तपाईं बैठक बाट अमेट छाप प्राप्त नयाँ वर्ष को।
तपाईं वा तपाईंको परिवारको गायन प्रतिभा को deprived छ भने, तपाईंले मुक्त हास्यास्पद कविता र गीतहरू एक प्रदर्शन गर्न सक्छन्। यस मामला मा सांगीतिक शैली भूमिका खेल्न छैन, यसको लागि जाने! हामी आफ्नो प्रतिभा सराहना गरिनेछ भनी हामी विश्वस्त छौं। यसलाई आफ्नो देशमा समय पाठ्यक्रम मा ठूलो humorist को अनुहार पहिचान गर्ने हुन सक्छ। हास्यास्पद नयाँ वर्षको शुभकामना एक impromptu को परिणाम हुन सक्छ। अक्सर तिनीहरूले धेरै funnier व्यक्तिहरूलाई बस छैन तल आउन सक्छ भन्ने प्रेरणा सम्झना, पहिल्यै तयार छन्। तपाईं अनुहार गुमाउन कम संभावना हुनेछ किनभने यो तयार गर्न र यस बारे चिन्ता गर्न छैन राम्रो छ।
तपाईं प्रेम तिनीहरूलाई लागि तयार कि अतिथि लागि सानो उपहार भूल छैन। आफ्नो हास्यास्पद क्रिसमस इच्छा राम्ररी यी उपहार सम्बन्धित गरिनेछ गरौं। एक कवितात्मक रूप तिनीहरूलाई पिट्न प्रयास गर्नुहोस्, छुट्टी संगत गर्न निश्चित हुन। तपाईंको "मोती" इतिहास लागि संरक्षित गरिएको छ, र मित्र र परिवारका एक लामो समय को लागि यो नयाँ वर्ष को स्मृति राखिएको छ तपाईं चाहनुहुन्छ किनभने, एउटा सुन्दर क्रिसमस कार्डमा इच्छा लेख्नुहोस्। हामी पनि एक सुन्दर नयाँ वर्षको अभिवादन र इच्छा दिन चाहनुहुन्छ:
नयाँ वर्ष मा सम्झना छैन,
एक मजाक र रमाइलो,
र पाठ्यक्रम पिएको प्राप्त छैन,
टाउको, ताकि चोट छैन
र यो एक स्वस्थ शरीर थियो।
आनन्द, शान्ति, र भलाइ,
र परिवार न्यानोपन!
आफ्नो प्रियजनलाई बारे मा भूल छैन र संधै तपाईं वरिपरि सबै ती त आवश्यक छ कि न्यानोपन साझेदारी, भाग्यशाली र खुसी हुन।
भोजमा Nikolaya Chudotvortsa: मिति, इतिहास र परम्पराहरू
कपाल र अन्य जटिल प्रदूषण: एक भ्याकुम क्लिनर कसरी चयन गर्न
रास्पबेरी cheesecake। व्यञ्जनहरु। फोटो
मास्कोमा एक अपरेशनको लागि कोटा: यसलाई कसरी प्राप्त गर्ने? मास्को मा उपचार को लागि कोटा
पवित्र क्रस (Godenovo): चमत्कार, समीक्षा, ठेगाना र तालिका
इवान को 3rd को शासन
अभिनेता दिमित्री Lysenko: Filmography र जीवनी
यो लुगा धुने मेसिन मा पाउडर कहाँ सुत्न? सुझाव
दर्जा फोन गुणस्तर र लागत
एक समीक्षा: छाला मा खण्डका चिह्न लागि सबै भन्दा राम्रो उपाय